INSELELO OLWAZINI OBELUKHONA NGOKUHAQWA KWEZINGANE WUKHUVETHE - Ilanga News
Home Izindaba INSELELO OLWAZINI OBELUKHONA NGOKUHAQWA KWEZINGANE WUKHUVETHE
INSELELO OLWAZINI OBELUKHONA NGOKUHAQWA KWEZINGANE WUKHUVETHE
BASENGCUPHENI enkulu yokufa abantwana abahaqwa yiCovid-19, abanezinye izifo eziyimixhantela
UVEZA isithombe esingesihle umbiko wakamuva wocwaningo olumayelana nezingane ezingeniswa ezibhedlela ngenxa yeCo-vid-19 emazweni aseAfrika, uma kuqhathaniswa nezisemazweni adla izambane likapondo. Lo mbiko uveza ukuthi ezinganeni ezingeniswa ezibhedlela zihaqwe yiCovid-19, ezingaphansi konyaka owodwa ubudala zise ngcupheni yokufa ngokuphindeke kawu-5 uma kuqhathaniswa nezineminyaka ephakathi kuka 15 kuya ku-19. USolwazi Refiloe Masekela oyinhloko yePaediatrics and Child Health eUniversity of KwaZulu-Natal, obeyingxenye yalolu cwaningo, uthi umphumela walo oshicilelwe kwiJAMA Pediatrics ngeledlule, uyakhathaza.
Ucwaningo lweziwe ezibhedlela eziwu-25 emazweni oku-balwa kuwo iNingizimu Afri-ka, iDemocratic Republic of Congo, iGhana, iKenya, iNigeria neUganda, phakathi kukaNdasa (March) noZibandlela (December) 2020. “Kulolu cwaningo lwethu kutholakale nokuthi izingane zayo yonke iminyaka, ezinezifo eziyimixhantela, okubalwa kuzo ihigh blood pressure, yizifo zamaphaphu ezingamahlalakhona, yihematological disorders nomdlavuza, zisengcupheni enkulu yokufa,” kusho uSolwazi Masekela. Omunye ungoti obeneqhaza kulolu cwaningo, uSolwazi Jean B. Nachega weInfectious Diseases and Microbiology and Epidemiologym eUniversity of Pittsburgh Graduate School of Public Health, uthe nakuba lolu cwaningo lugxile elwazini oluqoqwe ngesikhathi iCovid 19 isanda kubheduka, kodwa isimo kasikaze sishintshe ngokutheni ezinganeni ezisemazweni ase Afrika.
Uqhube wathi kulindeleke ukuba sibe sibi ngokwedlulele isimo emuva kokubheduka kohlobo olusha lwegciwane leCovid-19 elibizwa ngeOmicron, elidlangile njengama-nje, okubikwa ukuthi linezinga eliphezulu lokuthelelana. Kubikwa ukuthi ulwazi olusetshenziswe ngongoti lubandakanya abantwana abawu 469, abaphakathi kweminyaka esukela kwemithathu kuya kwewu-19. Ikota yalaba ba ntwana kubikwa ukuthi ibivele inezinye izimo ezithile zempilo. Ochwepheshe bathole ukuthi u-34% wabantwana abebeyingxenye yocwaningo, ingeniswe egunjini labagula kakhulu ezibhedlela, ibidinga ukufakelwa umoya
U-21% wabangeniswe ezibhedlela ubudinga ukulekelwa ngomshini wokuphefumula (invasive mechanical ventilation). Ngaleso si khathi socwaningo, abantwana abawu-39, okuyisibalo esingaphezudlwana kuka-8%, bashonile. Lesi sibalo kubikwa ukuthi siphezulu kakhulu uma kuqhathaniswa nezinga labantwana abashone emazweni aphila kahle, esiphakathi kuka 0.1% no 0.5%. USolwazi Nechega ophinde asebenze ophikweni lweMedicine and Health Sciences eUniversity of Stellenbosch uthi umphumela wocwaningo ukhomba izinga eliphezulu lokufa ezinganeni ezingeniswa ezibhedlela ngenxa yeCovid-19, uphonsa inselelo elwazini obelukhona lokuthi lo mkhuhlane kawuyona ingozi enkulu ezinganeni uma kuqhathaniswa nakwabadala. Wexwayise ngokuthi uma ingane encane enesifo esiwumxhantela, isendaweni lapho kushoda khona odokotela bekhethelo (specialist doctors), futhi lapho kushoda khona nezinsiza eziqondene nokwelashwa kwezingane, ibhekana nethunzi lokufa. Ngokwalolu cwaningo, into engasiza kulesi simo wukuba kuphuthunyiswe uhlelo lokugoma laba bantwana emazweni ase Afrika. Ngaphezu kwalokho, lolu cwaningo lukhomba nokuthi kunesidingo esiphuthumayo sokuba kwandiswe izisizakusebenza ekwelashweni kwezingane e Afrika.
Previous articleBakhathazekile ngonyamalele
Next articleIndida ngokubulawa kwekhansela elisha